बिगुल संवाददाता, काठमाडौँ । पति पत्नीको झगडा परालको आगो भन्ने प्रचलन नेपाली समाजमा चल्दै आएको पाईन्छ । तर कतिपय अवस्थामा भएका झगडाहरुको दिर्घकालिन समाधान हुन नसक्दा संम्बन्ध बिच्छेद समेत हुने गरेको छ । दाम्पत्य जिवनमा बिश्वासको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यस्तो बिश्वास कायम हुन नसकेमा सम्बन्ध धेरै समयसम्म चल्दैन् । बिश्वासमा केहि गरी शंका उत्पन्न भएमा निकै समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । आजको लेखमा हामी पत्नीको कुन ब्यवहारले पतिलाई शंका उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारे चर्चा गर्दै छौँ ।
१. धेरै समय मोवाईलमा ब्यस्त हुदा ।
पतिले प्रत्यक्ष रुपमा नचिनेका ब्यक्ति संग पत्नी मोवाईलमा घण्टौँ समय कुरा गर्ने गर्नाले शंका उत्पन्न हुने गर्दछ । यस्तै धेरै लामो समयसम्म फेसबुक तथा ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा समय बिताउदा पनि पतिलाई पत्निमाथी शंका उत्पन्न हुन्छ । यसैले यदि शंका उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने यस्ता कुराहरुमा पति संग सल्लाह गरेर गर्न सकिन्छ ।
२. धेरै समय घर बाहीर बिताउनु
घरमा पति नभएको समयमा बारंबार एक्लै घरबाट बाहीर जाने, तथा पतिलाई जानकारी नभएका मानिसहरु संग लगातार भेट्ने गरेमा पतिलाई शंका हुन सक्छ । पतिसंग झुठ बोलेर अथवा पतिको इच्छा बिपरीत यसरी काम गरेमा शंका उत्पन्न हुन जान्छ ।
३. पार्टी तथा समाहरोहमा अन्य पुरुषहरुसंग हाँसेर कुरा गर्नु
विवाह, पार्टी, जन्मोत्सब तथा अन्य यस्तै कार्यक्रमहरुमा अन्य पुरुषहरुसंग धेरै समयसम्म कुराकानी तथा हाँसो मजाग गरेको पतिलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ । यस्तो गरेको खण्डमा पतिले एक्लो महशुस गरेको हुनसक्छ, अथवा आफ्नो बेवास्ता गरेजस्तो महशुष भएमा शंका उत्पन्न हुन जान्छ
४. धेरै श्रृङगार गर्दा
कतिपय पुरुषहरु आफ्नो जिवसाथीले धेरै श्रृङगार गर्दा बिभिन्न प्रकारका शंका उपशंका हरु गर्ने गर्दछन् । तर पति को सहमतीमा यस्तो श्रृङगार गर्नु भएमा शंका गर्ने बाटो हुदैन् ।
५. कार्यलयका सहकर्मी का बारेमा कुरा गर्दा
आफ्नो श्रीमानका अगाडी कार्यलयका सहकर्मी का बारेमा कुरा गर्दा पतिले शंका गर्न सक्ने संभावना रहन्छ । आजको एक्काइसौ सताब्दीमा महिला पुरुष बराबर भन्ने नारा उठाएपनि पुरुषवादी सोचका कारण महिलामाथि अनावश्यक रुपमा शंका उपशँकाहरु गर्ने गर्दछन् । कुनै ठोस कारण बिना पत्नीमाथि शंका गर्नु गलत हो । एजेन्सी
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन २४, २०७४१९:०६
आफ्नो सुन्दरता लुकाउने यो कस्तो परम्परा ! विश्वमै नभएको सुन्दरता लुकाउने फेसन हेर्नुहोस् !
७ वर्षसम्म ‘सेक्स दास’ जस्तै गरि राखिएकी यी मोडलको यस्तो छ कहालिलाग्दो पिडा!
यी जुम्ल्याहा मोडल सामाजिक संजालमा भाइरल हुँदै ! सँगै हुने गर्छन् नग्न पनि ! (तस्विरहरु)
संगीतले हामीलाई किन छिटै भावुक (भावोद्विलत) बनाउँछ ? ( भिडियो )
पेट दुखेर अस्पताल पुगेका व्यक्तिको पेट भित्र भेटिए किलै-किला, अप्रेसन गर्ने डाक्टरनै कसो बेहोस भएनन् !
अनुहारको चमक फिर्ता ल्याउन अपनाउनु होस् यी ५ उपाय ! केहि दिनमानै बन्नुहोस् सुन्दर !